भूकम्प : १६ हजारभन्दा बढी घरले पाए १२ अर्ब ३ करोड २ लाख भुक्तानी ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
भूकम्प : १६ हजारभन्दा बढी घरले पाए १२ अर्ब ३ करोड २ लाख भुक्तानी !
काठमाण्डौँ । गत वर्ष भूकम्पमा परी क्षति भएका तथा जोखिम भएका घरलाई बीमा बापत अहिलेसम्म १२ अर्ब तीन करोड दुई लाख भुक्तानी गरिएको छ । बीमा समितिले अहिलेसम्म १६ हजार तीन सय ४३ घरको बिमा बापतको रकम कम्पनीहरुले उपलब्ध गराएको जनाएको छ । यो रकम गत भदौ मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम हो ।
गत वर्ष वैशाख १२ गते गएको भूकम्प तथा त्यसपछिका परकम्पबाट आवासीय घर तथा ठूला महलको समेत क्षति भएको थियो । समितिका अध्यक्ष प्रा डा फत्तबहादुर केसीले बीमाप्रति सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसारको अभिवृद्धि गरिएपछि अहिले त्यसप्रति उनीहरुको चासो र सरोकार वृद्धि भएको बताए ।
उनले बीमा व्यवसायबाट आव २०७१र७२ मा ३६ अर्ब २८ करोड ९० लाख बीमा शुल्क आर्जन भएको जानकारी दिँदै २०७०र७१ मा ३० अर्ब ४३ करोड १३ लाख बीमा शुल्क आर्जन भएको बताए । एक बर्षमा यो १९ प्रतिशतले बढेको हो । सम्बन्धित घरधनीले भूकम्प जानुअगाडि बीमा गरेका ती घर, अपार्टमेन्ट तथा मलको सङ्ख्या १७ हजार आठ सय ४० घर रहेको थियो ।
केही जटिल प्रक्रियाका समस्या रहेका दाबीउपर बीमा दाबी उजुरी छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको समितिका उपनिर्देशक ध्रुव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए उनका अनुसार एकपटक भुक्तानी भएपछि पुनः आएका परकम्पबाट क्षति भएका घर तथा आवास भत्किएकाले पनि समस्या बढेको छ ।
नेपालमा नौवटा जीवन बीमा कम्पनी तथा १६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी कार्यरत छन् । घर, मोटरलगायतको गरिने बीमा निर्जीवन कम्पनीले गर्ने गर्दछन् ।
३ कार्तिक २०७३, १।००